Kaningi kunezimo lapho isakhamuzi kuyadingeka ukuze yezizathu ezithile ukuze singene endlini. Kodwa kukhona Ilokhi ekhethekile electronic, okuyinto ayikuvumeli ukuba singene. Kwenze can kuphela abaqashi lalinomnyango ethile. Yini okufanele ngiyenze uma umnyango yokungena nge-intercom "ngokwesimo"? Kanjani ukuze uyivule endabeni ethile? Eqinisweni, uma uqaphela kusengaphambili mayelana nalesi sici, inkinga isixazululekile ngaphandle kokuhlupheka okukhulu. Okulandelayo izokwethulwa kuphela iseluleko esingcono kakhulu nezincomo umbuzo ngaphansi cwaningo.
Umbuzo wokuqala ephakama abantu - futhi ngempela kungenzeka ukuvula ifoni umnyango, uma ungeyena eyisakhamuzi? Yebo, ukuletha imibono ekuphileni ngangokunokwenzeka. Kodwa-ke kuzodingeka uqale noma kuthuthukiswe ukulungiselela, noma ukuba abe smart on-site.
Minyaka yonke isicabha amafoni isiba nzima. Abakhiqizi ozama ukuba isivikelo esiphezulu kumadivayisi zabo. Kuphela kulesi simo umkhiqizo uyoba yimpumelelo.
ukunakekelwa okukhethekile kuyadingeka intercom "ngokwesimo". Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe uyivule? Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukuzama angabacwasi. Abaningi ngikuveze ukuthi lo imodeli Ilokhi elekthronikhi, sibonga production ezifuywayo, cishe lungekho ngaphansi kwemifantu. Ngakho-ke, akukho 100% isiqinisekiso sempumelelo. Okulandelayo siyonikwa tips umhlabeleli namasu ezingasiza nge ukugqekeza "ngokwesimo".
Iseluleko ukuthi ngokuvamile unikezwa izakhamuzi - ukwenza kube isihluthulelo intercom. Khona-ke emnyango engafinyelelwa ngaphandle kwezinkinga. Umuzi ngamunye eyisakhamuzi onesihluthulelo magnetic intercom. Ngalo, umnyango ivulekile ngaphandle kwekucala isikhathi esithile.
Inkinga eyinhloko - kubalulekile ukukhiqiza ukhiye ehlukile umnyango ngamunye. Futhi zahlelwa kazibuthe umnyango ngikwazi ukuqala kunjalo elula cha. Ukuze wenze lokhu, kumele okungenani ukwazi imiyalo ku imodeli intercom. Lithi algorithm izinhlelo.
Ngo umkhuba, ukukhiqizwa kwanoma ukhiye wangasese has cishe akukho ndawo emphakathini. Yingakho abaningi becabanga, indlela ukuvula intercom "ngokwesimo" imodeli amasha nge ezinye izindlela. indlela wathi ukhona, kufanele baqaphe, kodwa ekuphileni kwangempela le alisetshenziswa.
Kodwa lesi seluleko kuyaphumelela. Nokho, kukhona ingozi ukwehluleka. Noma, uma sikhuluma okokufaka ehlelekile endlini ethile, kukhona ukwehla ukuphumelela indlela.
Ngaphambi kokuba yokungena emnyango kazwelonke ukuthi ifakwe intercom "ngokwesimo". Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe uyivule? Isixazululo elula futhi eziphumelela kakhulu ukuba asebenzise ucingo kunoma efulethini ngesicelo ukuvula emnyango. Omunye ungacabanga, isibonelo, makhelwane, owabe esecela babekhohliwe isihluthulelo yokuvala yendlu. Noma postman.
Le ndlela isebenza, kodwa ngaso sonke isikhathi. Ngezinye izikhathi kufanele azwakale eziningi ezindlini ngaphambi kwanoma ubani uyavuma ukuvula umnyango. Ngokuhamba kwesikhathi, omakhelwane uzoma ukwenza kanjalo ngaso sonke. Kuyancomeka ukuba bangalisebenzisi kabi le ndlela. Mhlawumbe le ndlela ubhekwa ephumelela kunazo. It ikuvumela ukuba sibone ukuthi ukuvula intercom "ngokwesimo" ngaphandle ukhiye nanoma iyiphi nolwazi olukhethekile.
Yini okulandelayo? Ungaluvali amathiphu namasu ngokwephula yokuvala emnyango emnyango. Kwezinye izimo, ungase ube nesineke futhi ulinde kancane ... emnyango endlini. Kungani?
Ukuze siphendule, ukuvula i-intercom, "ngokwesimo" ngaphandle ukhiye, ngezinye izikhathi kwanele amlinde aze aphume ngomnyango othile. Lokho, ukuba ibekezele futhi ungene endlini, lapho othile ngaphesheya kudedela ukukhiywa.
Eqinisweni, lena akuyona indlela breaking. Kodwa ukuze singene endlini, le ndlela kuyasiza. Futhi okwamanje ku intercoms kokuvula namathiphu jikelele. You can nje "amafakthoriyali" izindlela ezinjalo prodelyvat. Ngo umkhuba lokhu akuhlali iseluleko ewusizo. Kungcono ukubiza othile kusuka abaqashile lucela ukuvula umnyango. Kungenzeka ukuthi akekho umuntu oyophuma endlini ngoba ngaso sonke isikhathi sokulinda!
Futhi manje ungakwazi uqhubekele iseluleko osebenza kuphela "ngokwesimo". Iqiniso lokuthi ngayine inezidingo zayo izimfihlakalo zayo intercom nokugenca. Noma kunalokho, izinhlelo. Amalokhi Electronic - kukhona amadivayisi abe nezilungiselelo zabo. Uma bengazange ukuguqulwa ngesikhathi ukufakwa, kungenzeka ngaphandle kwezinkinga, ngaphandle ukhiye kazibuthe ukuze uvule.
Njengoba ezihlongozwayo intercom evulekile "ngokwesimo"? 6 izinhlamvu ikhodi kuyosiza kule. Kukhona inhlanganisela eziningana ezingasiza ekuhumusheni imibono.
Okokuqala kunconywa ukusebenzisa inhlanganisela 123456. Ngemva ngayo ethile nge-intercom, ungakwazi chofoza inkinobho "Shayela". Uma kwenziwa kahle, lock lizovuleka. Man ngeke ukhiye kazibuthe ukuze singene endlini ngaphandle kwezinkinga.
Zero, zero futhi
Nokho, le ndlela akuyona ngempumelelo njalo. Futhi ngakho-intercom "ngokwesimo" linikeza olunye uhlobo ikhodi njengoba esinye isixazululo. Ekusebenteni, kuhlanganisa imisebenzi elandelayo futhi akuhlali. Nokho, amathuba okuphumelela sisekhona.
Umuntu ofuna avule umnyango endlini lapho i- "ngokwesimo", udinga ukudayela iphaneli "000000". Futhi-ke, njengoba kwaba njalo endabeni odlule, chofoza "Call". Uma ekuqaleni kohlelo intercom kwakungafakwanga, ungakwazi ithemba lokuphumelela.
Abantu abaningi bathi le izindlela kuyaqabukela ukusiza. Okwamanje, phakathi izimfanelo kokufaka intercoms kuyinto reprogramming yabo. Kulesi simo, ungazama ukusebenzisa amanye amaqhinga. Kuyini lokhu? Indlela yokuvula i-intercom "ngokwesimo" ngaphandle ukhiye? Ningasebenzeli amakhodi ngaphambilini ezihlongozwayo - kunesinye inhlanganisela. Kodwa kulesi simo kuyodingeka ukugcina ukulandelana ethile yezenzo!
Kuyini lokhu? Kukhona amasu eyimfihlo, njengoba siqinisekiswa abantu abaningi, kuyasiza ngempela yini ukuxazulula inkinga. Indlela yokuvula i-intercom "ngokwesimo"? Ngenxa yalesi Udinga ukufaka inhlanganisela encane. Kodwa hhayi ezingu-6. I-algorithm zizoshintsha kancane.
Into umuntu wokuqala ofuna singene endlini, kufanele bathole idivayisi ukubonisa "5". Okulandelayo ulinde kancane, imizuzwana mayelana 3-5. Manje ku-intercom faka "180180", bese uchofoza inkinobho ethi "Shaya". Ngemva kwalokho okunikelwe chofoza inkinobho nenani "4" bese "call" msebenzi.
Uma kwenziwe ngendlela efanele, i-intercom liyavuleka. Futhi abantu bazokwazi ukungena emnyango kalula. Njengoba umkhuba ubonisa, hhayi kaningi kakhulu, le ndlela isebenza. Nokho, njengazo zonke ezinye imikhandlu. Vula i-intercom "ngokwesimo" ikhodi uhlobo olulodwa noma kwenye akunakwenzeka ukuba basize. Kodwa kuwufanele umzamo.
Tricks Trade - impumelelo enkulu
Kodwa indlela elandelayo - buyinto evamile. Kodwa ngokuvamile kuyasiza ukuxazulula le nkinga. Iqiniso liwukuthi uma umuntu wacabanga, ukuvula i-intercom, "ngokwesimo" keyless (amakhodi ukuvula, ake kungasizi), ungabiza opharetha ohlinzeka izinsizakalo enqabeni. Ngokuvamile kukhona mayelana inombolo intercom.
Kwanele ukwazisa isisebenzi ukuthi ilahlekile isihluthulelo nge-intercom, futhi manje akunakwenzeka ukuba uthole emnyango. Ungakhohlwa ukuthi udinga ukwengeza - ". Omakhelwane musa ukuvula" Khona-ke opharetha ongamtshela ikhodi yangempela zokusebenza ukuvula i-intercom. Ngemva kwalokhu, caller Unelungelo ayisebenzise ngezinhloso zabo.
Impendulo enjalo yombuzo kanjani ukuvula intercom "ngokwesimo" keyless kuyasiza uma reprogramming wakhe kwenziwa lapho Ilokhi elekthronikhi. Nokho, asikho isiqinisekiso sokuthi umuntu izovula ikhodi umnyango. Ngakho musa enethemba layo.
Manje kuyacaca ukuthi intercom "ngokwesimo". Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe uyivule? Lokhu kuyodinga ukuba bazame zonke izindlela ngaphambilini ezihlongozwayo. Kaningi ngokwanele ukuba ubize omakhelwane - futhi uvule umnyango.
Kunoma ikuphi, it uzama crack "ngokwesimo", kuyafaneleka ukukhumbula - esimweni idivayisi uhlelo reprogramming noyedwa yezindlela ezihlongozwayo ngeke kusize. Mayelana amakhodi esimweni esithile ziyolibaleka.
Ukwahlukanisa izakhiwo: iziqondiso
Indlela sokulungiselela ultrasound kwezinso: amacebiso awusizo
"Jaguar", crossover: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Synapse kagesi kanye nezici zabo
Karaganda. Uphi Karaganda, umlando kanye nencazelo jikelele
Cat Bengal: zohlobo incazelo, ukunakekelwa kanye nokubuyekeza
Metal (subculture): umlando ukubukeka, ikakhulukazi